Cabitaanka gaaska leh waxa ay kordhiyaan baruurta caloosha iyo dhexda - Horn Future
Cabitaanka gaaska leh waxa ay kordhiyaan baruurta caloosha iyo dhexda
Daraasad cusub oo dhawaan lasoo saaray ayaa waxa ay ku soo gunaanaday in cabitaanka sonkorta leh sida cabitaanka gaaska leh ee maalin kasta la cabo in uu keeni karo in baruurtu ay ku ururto dhexda iyo caloosha.
Xeeldheerayaashan ayaa waxa ay sheegeen xidhiidhka ka dhexeeya baruurta caloosha ku wareegsan iyo xubnaha gudaha ee jidhka, sida kelyaha iyo beer yarta taasoo saamayn ku yeelata howsha hormoonada, oo ay ku jirto maadada (Insulin) tu ,nuuca labaad ee macaanka iyo cudurada wadnaha.
Dr. Caroline Fox oo hogaaminaysey daraasadan ayaa sheegtay in daraasado hore oo badan oo la sameeyay ay sheegeen in xidhiidh ka dhexeeya cabitaanka sonkorta leh iyo buurnida , “waxana ay intaa ku dartay oo tidhi waxa aan daraasad ku sameynay qaybaha baruurta ee jidhka iyo isbedbadilka muddo ka dib.”
Fox ayaa xustay iyada iyo dhammaan dhigeeda daraasadan la wada cid kaste oo ay saameysay daraasadani in dhexda iyo caloosha baruur ay ku yeesheen muddo kadib, laakiinse bay tidhi kuwa isticmaala cabitaanada sonkorta leh maalin kaste gaar ahaan waxa ay yeeshaan baruur xad-dhaaf ah.
Cilmibaadhista ayaa lagu falanqeeyay xogta dad ku dhow kun qof oo qaan gaadh ah waxana sameeyay daraasadan Machadka Framingham ee Massachusetts ee America.
Dadkan ayaa waxa ay ka jawaabeen su’aalo ku saabsan caadooyinkooda cuntada iyo cabitaanka oo ay ka mid yihiin cabitaanka ay hooseyso tamarta laga helo cuntada (low-calorie)ku.
Dadkan ayaa bilowgii daraasadda la mariyay sawrika CT ga si loo cabbiro tirada iyo baaxadda unugyada baruurta ee dhexda iyo caloosha inta qiyaastii ay yihiin,waxana 6 sano kadib marka leh la mariyay sawirka CT ga.
Daraasadan oo lagu daabacay majjalad cilmiyeedka loo yaqaano (The Circulation) ayaa natiijadii lagu sheegay intii lagu guda jiray muddadaas ay kor u kacday mugga baruurtu 658 sentimitir cubic kuwii isticmaalayay cabitaanada sonkorta leh, halka kuwii maalin kaste isticmaalayay cabitaankan ay kor u kacday tiradu 852 sentimitir cubic.
Fox ayaa waxa ay u sheegtay wakaalada Reuters milay ay kula xidhiidhay khadka telefonka in tani ay ka dhigan tahay korodhka ah 0.8 kg baruurta caloosha kuwii maalin kaste isticmaalayay cabitaankan.
Waxa ay intaa ku dartay in farqigan u dhexeeya uu noqon karo mid yar baruurta caadiga ah ee caloosha,laakiinse bay tidhi way ku filan tahay in ay u keento halis la xidhiidha nidaamka dheef-ridiqqa.
Daraasadan isku may xidhin farqiga u dhexeeya cabitaanka (calories) kiisu hooseeyo iyo baruurta caloosha.
Ururka Dhakhaatiirta America ee wadnaha ayaa waxa ay ku taliyeen in aynan haweenaydu ka badan (calories),tamarta maalintii ay ka hesho sonkorta 100 calories halka ragga lagu taliyay in aynan ka badan 150 calories.
« La France refuse de suspendre les essais cliniques	» Sonkortu waxa ay kordhisaa halista haleelitaanka kansarka naasaha iyo sambabada